David Ley ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်“ ကျွန်ုပ်တို့သည် Porn ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွင်သိပ္ပံပညာကိုအားထားသင့်သည်” (မတ်လ ၂၊ ၂၀၁၆) ။
ဒေးဗစ်လေဒီ၏ဖိလစ်ဇင်ဘာဘတ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း -“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွင်သိပ္ပံပညာအပေါ်မှီခိုရမည်” (2016)
David Ley ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွင်သိပ္ပံပညာကိုအားထားသင့်သည်” (၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ် ၂ ရက်)
တဦးတည်းရဲ့သူရဲကောင်းများနှင့်အတူ Disagreeing အမြဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုးတက်မှုနှုန်းအတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စိတ်ပညာရှင်အဖြစ်ကျနော်တို့ဒေါက်တာဖိလိပ္ပု Zimbardo ၏တော်လှန်ရေးအလုပ်, သူ၏သုတေသနနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလူ့အပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုပြောင်းလဲပြီအရာအတွက်လမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား။ စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ငါဒေါက်တာ Zimbardo တစ်ကြွေးမြီအကြွေး ကြေးဇူးတငျစကား။ ယခုတွင်ငါသည်ကြောင့်ဤမျှခက်ခဲတွေ့ပါဒါကြောင့် flatly, အန္တရာယ်မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းကိုသည်သူ၏မကြာသေးခင်ကပို့စ်တွင်သူသည်ရိုးရိုးကြောင်းပြော, ဖွင့် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း.
ဒေါက်တာ Zimbardo ဟာသင့်ရဲ့ကိုးကား ဦးနှောက်ကို အဆိုပါစွဲလမ်းများအတွက်အထောက်အထားအဖြစ် Porn နှင့် Reddit NoFap ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ သဘာဝ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရွေးသို့ရာတွင်သုံးပြီးများ၏အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမအသိအမှတ်ပြုမှုသို့မဟုတ်အသိပေးချက်နှင့်အတူသူသည်ဒါမရွယ်တူချင်းဖိအားမှဘာသာရပ်ကံဆိုးရဲ့ ညီ သီအိုရီ, သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ ဘွဲ့ကြိုစိတ်ပညာအတန်းများ၌ထိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီများ၏သဘောတရားများကိုကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့ပြီး Dr. Zimbardo ၏သုတေသနအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖော်ပြချက်၏အများကိန်းသည်ဒေတာမဟုတ်ပါ၊ ဒေါက်တာ Zimbardo ကိုးကားသောညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဤဆိုဒ်များမှအဖြစ်အပျက်များသည်လူမှုရေးစိတ်ပညာအကြောင်းပိုမိုဖော်ပြသည်။
ဒေါက်တာ Zimbardo ညစ်ညမ်းနေတဲ့အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြရာအများအပြားလေ့လာမှုများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုကိုးကားရန်ပေါ်တတ်၏။ ကံမကောင်းစွာပဲဆက်စပ်နှိုင်းယှဉ် causation ၏ပြဿနာရှိမယ့်, တဖန်, တစ်ခုခုငါအခြေခံသုတေသနအတန်းထဲတွင်အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။ porn စားသုံးမှုနှင့်အာရုံကြောသက်ရောက်မှုအကြား link တစ်ခုအကြံပြုသောဤဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုများ, ကံမကောင်းထိုကဲ့သို့သောလိင်စိတ်နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာအဖြစ် variable တွေကို predisposing ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်ရန်လို့မရပါဘူး။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများယခုမြင့်မားသောညစ်ညမ်း-အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ်နှင့်အတူလူဖြစ်ရလေ့ကြောင်းသရုပ်ပြနှင့်ဆီသို့ဦးတည်ကြီးမြတ်သောသဘောထားကြပါပြီ အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံ။ ဤသဘောသည်ဤလေ့လာမှုများရှာတွေ့ထားတဲ့အာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပတျသကျကြောင်းအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အဲဒီအာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများတကယ်တော့အကြောင်းရင်းမဟုတ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါကင်းဘရစ်ဟာဦးနှောက် porn ဒေါက်တာ Zimbardo အားဖြင့်ကိုးကားလေ့လာမှုအဖြစ်အခွားသူမြားစှာကငျြးပခဲ့တဲ့သူဒေါက်တာ Valerie Voon, မကြာသေးမီကသူမနှင့်သူမ၏ Co-စာရေးဆရာများအမှန်တကယ်ကဒီအချက်မှာတစ်သိပ္ပံနည်းကျသဘောတူညီမှုမျှမရှိကြောင်းဖော်ပြတဲ့စက္ကူထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် porn သို့မဟုတ်လိင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စှဲမွဲမှု, မဤဘာသာစကားကိုသင့်လျော်သောကြောင်း။ သူမရဲ့စက္ကူထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအပေါ်စာပေလိင်ကွဲအထီးဆီသို့ဦးတည်အလွန်အမင်းဘက်လိုက်သည်နှင့်အခြားလူဦးရေအပေါ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းသည်အလွန်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များ၏ application သို့မဟုတ်ယေဘုယျတားဆီးကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ သူမ၏အတွက် စကားများ (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်), CSB (Compulsive Sexual Behaviour) သို့မဟုတ် CSB ကိုသတ်မှတ်ရာတွင်မည်သည့်အတိုင်းအတာသည်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများစုဆောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အလုံအလောက်မရရှိနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောမလုံလောက်သောအချက်အလက်များသည်ခွဲခြားခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအားပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ neuroimaging အချက်အလက်များသည်ဆေးစွဲမှုနှင့် CSB အကြားတူညီကြောင်းအကြံပြုသော်လည်း၊ ဒေတာများသည်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အထီးတစ်ခုတည်းသာလိင်ကွဲလိင်တူခြင်းနှင့် Cross-sectional design ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒေါက်တာ Zimbardo သည်ဤမလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုအနက်ဖွင့်ရာတွင်တူညီသောသတိထားမှုကိုမကျင့်သုံးခြင်းမှာကံဆိုးဖွယ်ဖြစ်သည်။
Case Western မှ Joshua Grubbs နှင့်ခရိုအေးရှားမှ Alexander Stulhofer ကဲ့သို့သောစာရေးဆရာများမှပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းသုတေသနပြုမှုများစွာသည်ကိုယ်ကျင့်တရား၏အခန်းကဏ္ and နှင့်ခိုင်မာမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ယာနျဘာသာတရားကို လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူမြား၏နောကျခံပါ။ နောက်ထပ်ထိုသုတေသီများမျက်မြင်လက်တွေ့, မျိုးစုံအတွက်သရုပ်ပြလေ့လာမှုများပုံတူကူးယူခြင်း, ကြောင့်ကြ ဝိသေသလက္ခဏာ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်နှုန်းဖြင့်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်မထားပါ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ဤသုတေသီနှစ် ဦး စလုံးသည်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (သို့) အခြားသူများထက်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Grubbs လည်း "porn စှဲလမျးသူ" ၏ဝိသေသလက္ခဏာထိခိုက်မှုနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲဖန်တီးသော iatrogenic အယူအဆ, ကြောင်းမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့မုန်းဖို့တစ်ဦးချင်းပြောနေအားဖြင့်၎င်း, ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် လိင်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် Dr. Zimbardo သည်အမျိုးသားများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအား၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုမုန်းတီး။ ကြောက်ရွံ့ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုလက်ခံရန်အားပေးခြင်းအားဖြင့်ဤအန္တရာယ်ကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ Dr. Zimbardo ၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာချက်အရဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူနှင့်ခံစားချက်အပေါ်မျှော်လင့်ချက်၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍၊ သူသည်သူ၏အမြင်များသည်ညစ်ညမ်းသောအပြုအမူများနှင့်ရုန်းကန်နေရသောသူများအပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုကိုသူမမြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်အံ့အားသင့်မိသည်။ ဤအအထောက်အထားတွေကိုသို့ဒေါက်တာ Zimbardo ထောက်ခံသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေါက်တာ Zimbardo Porn သွေးဆောင်၏မကြာသေးမီတောင်းဆိုမှုများကိုးကား Erectile အလုပ်မဖြစ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်အထောက်အထားဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Zimbardo သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် Kinsey ၏လေ့လာမှုများနှင့်လူငယ်များတင်ပြသော ED နှုန်းမြင့်မားမှုကိုဖော်ပြသောအမျိုးသားများမှတင်ပြသော erectile dusfunction နှုန်းပြောင်းလဲမှုများကိုထောက်ပြသည်။ သို့သော်ဒေါက်တာ Zimbardo သည် erectile performance ဆေးများတီထွင်မှုနှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သောလူမှုရေးအပြောင်းအလဲများကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းသို့မဟုတ်စဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် erectile dysfunction အားထုတ်ဖော်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတိုးပွားစေခြင်းဖြင့် အရှက်ကွဲခြင်း ဒါကြောင့်သူနဲ့ဆက်စပ်။ ထို့ပြင်ဒေါက်တာ Zimbardo လူပျိုတို့အတွက်ပညာရေးရှာဖွေစူးစမ်းတိုင်းလေ့လာမှုမှာအဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများစိုးရိမ်သောက, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဖော်ပြရန်ပျက်ကွက် အဝလွန်ခြင်း, ဆေး နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော ED သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုထုတ်ဝေခြင်းမရှိပါ။ PIED အတွက်အထောက်အထားမရှိသောသက်တူရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးမျိုးစုံကိုယခုတွင်ထုတ်ဝေသည်။ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နှောင့်နှေးမှုဖွယ်ရှိသည် အော်ဂဇင်.
ကျနော်တို့ porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်အတွက်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုပွင့်လင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးရှိခြင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါသဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် - ငါဒေါက်တာ Zimbardo ရဲ့ကောက်ချက်သဘောတူ ပညာရေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်၏။ ဝမ်းနည်းစရာဒေါက်တာ Zimbardo ငါဆွေးနွေးမှုအတွက်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ငျြးပွညျ့မီအဘယ်သို့သောအကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ။ ငါထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်း, မျက်မြင်လက်တွေ့-based စဉ်းစားတွေးခေါ်နေဖြင့်ပဲ့ထိန်းရမည်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သညျးခံခှငျ့လှသောအခါအမေရိကန်စိတ်ကျန်းမာရေး Elsewise, ကငျြ့တရား-based စိုးရိမ်မှုတွေကိုအလွယ်တကူ, အတိတ်ကအမှားတွေကိုပုံတူပွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် ကျန်းမာခြင်း စက်မှုလုပ်ငန်းပြန်လည်ကောင်းမွန်များ၏မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုထောက်ခံ မှတ်ဉာဏ် စာတန်၏ syndrome ရောဂါ ကလေးညှင်းပမ်းနှိပ်ဆက်မှုသလောက်ယောက်ျား nymphomaniacs ခေါ်၏အခြေခံပေါ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ကုသအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်အဖြစ်လိင်ကြိုက်တယ်တဲ့သူ, ဒါမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာအမြိုးသမီးမြား ကျား, မ ဘက်လိုက်မှု။ ဤအမှုကိစ္စ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, သို့ရာတွင်နှင့်ဆရာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု မိမိအသီအိုရီ၏ထောက်ခံမှုအတွက်ဒေါက်တာ Zimbardo မှေးကဲ့သို့သော, သိက္ခာမဲ့နှင့်သိပ္ပံနည်းကျမမှန်ကန်တဲ့လက်တွေ့ချဉ်းကပ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံယနေ့ဘယ်လိုစကားစပ်နှင့်လူမှုရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကြောင့်ဒေါက်တာ Zimbardo ၏ပံ့ပိုးမှုများကို၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထက် သာ. ကောင်း၏ ဘက်လိုက်မှု ရှုပ်ထွေးသောလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကလူအကြောင်းတရားများများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှားယွင်းမထားတဲ့ထိရောက်သောနည်းလမ်းများတွင်ဤကိစ္စများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, porn ၏ကိစ္စများနှင့်အတူရုန်းကန်ကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။